Shiinaha Daaweynta la qaadan karo ee Tescar CET RET RF oo leh soo-saareyaasha Nidaamka Vacuum iyo alaab-qeybiyeyaasha | MENOBeauty
Naga soo wac: +86 18823704636
3D HIFU Mashiinka
Birta 3D HIFU
Mashiinka 11 HIFU Mashiinka la qaadan karo
Vertical 11 Khadar HIFU Mashiinka
Mashiinka Siilka HIFU
2 IN 1 HIFU Mashiinka Siilka
Mashiinka RF siilka
Vacuum Cavitation Mashiinka
Vacuum Vertical Cavitation Mashiinka RF
Mashiinka Mashiinka CET RET
Mashiinka RF Fractional
Daaweynta Tescar ee la qaadan karo CET RET RF oo leh Nidaamka Vacuum
2021 Mashiinka Qaabeynta Ugu Fiican
448khz Tescar therapy CET RET RF oo leh Vacuum
RET Resistive RF oo leh Vacuum
448KHZ RF inta jeer
1) Dhiirrigelinta wareegga dhiigga iyo hagaajinta dheef-shiid kiimikaad iyo difaac.
2) Nidaaminta endocrine, hagaajinta hurdada, yaree daalka.
3) Waxay yareysaa oo bogsataa qeybaha kala duwan ee jirka, sida qanjirka dhuunta ilmagaleenka, lumbar spondylosis, garabka barafoobay, iwm.
4) Wiishka wajiga, hagaajinta midabka maqaarka iyo gaabinta gabowga wajiga.
5) Hagaajinta cabirka jirka, yaree dufanka badan ee xubnaha jirka, khafiifinta iyo qaabeynta.
6) Soo celi shanta dareen ee caadiga ah adoo nasinaya murqaha iyo unugyada.
7) Waxay ka caawisaa soo kabashada hore ee murgacashada murqaha, muruqyada muruqyada, dhaawaca murqaha, iyo jimicsiga xanuunka
8) Xalliyaan astaamaha qabowga jirka, dheef-shiid kiimikaadka hooseeya, gacmaha iyo cagaha qabow, iwm
Principle Mabda'a CET
CET waa heer-kulka joogtada ah ee epidermis-ka, kuleylka kuleylka-qoto dheerna waa tiknoolajiyada asaasiga ah si loo hubiyo in maqaarku yahay mid raaxo leh oo aan waxyeello u geysan. Kadib, furka waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro kuleylka tamarta kuleylka, kaas oo si toos ah u gaari kara lakabka qoto dheer ee maqaarka isla markaana kicin kara dhaqdhaqaaqa degdegga ah ee ions iyo qaybaha jirka ee lagu soo oogay. Ama gariir, Capricorn wuxuu abuuraa kuleyl, isla mar ahaantaana, hoos yimaada ficilka tiknoolajiyada maqaarka ee maqaarka, kuleylka unugyada kolajka ee maqaarka. Marka tamarta kuleylka ah ee unugyada kolajka ee qotada dheer ay gaaraan 45 ° C-60 ° C, waxay si dabiici ah u soo saartaa foosha isla markiiba, waxay kicisaa dheecaanka kolajiin cusub oo dheeri ah si loo buuxiyo meelaha ka hooseeya kolajka atrophic iyo lumay, iyo dib u habeyn iyo dib u dhiska jilitaanka jilicsan maqaarka. Ugu dambeyntii wuxuu gaaraa adkeynta maqaarka, buuxinta laalaabka, dib u soo celinta maqaarka maqaarkiisa iyo dhalaalkiisa.
ET RET mabda '
Qalabka 'RET-frequency-sare' waa aalad miisaan-lumis ah oo soo saarta tamarta soo noqnoqota ee jirka bini-aadamka, waxay ka soo saartaa kuleyl qoto dheer maqaarka iyo lakabka maqaarka, waxayna kala-jabisaa dufanka jirka, iyadoo lagu gaarayo miisaanka oo yaraada. Marka qulqulka-soo-noqnoqodka sarreeya uu u firfircoon yahay jirka bini'aadamka, qiyaasta gariirka waa mid aad u yar, sidaa darteed dhaqdhaqaaqa ion si dhib yar lama soo saarin, mana laha falcelin koronto ama kala-baxa korantada. Haddii soo noqnoqoshada sare loo gudbiyo jirka bini'aadamka, unugyada bani'aadamka ayaa kululeyn doona. Tani waa sababta oo ah marka qulqulka qulqulka badan lagu dabaqo jirka bini'aadamka, markasta oo uu hada isbeddelo jihada, molikuyuullada unugyada ka kooban ayaa gariiri doona, waxayna isku xoqin doonaan midba midka kale si uu u sameeyo dhaqdhaqaaq wareeg ah, dhalanrog, iyo dhaqdhaqaaq isku dhaca ah. Dhaqdhaqaaqan molecular wuxuu sababi doonaa unugyada jirka bini'aadamka inay dhaliyaan kuleyl.
Technology Teknolojiyada cadaadiska maskaxda ee CNC
Marka loo eego qaabka metrical ee CNC, cadaadiska xun ee isku dhafan oo leh madaxa nuugista cadaadiska xun ee khaaska ah, marka loo eego xaaladaha maqaarka shakhsi ahaaneed ee jirka, adoo adeegsanaya qoto dheer oo dufan iyo duugis ah lakabyada maqaarka maqaarka, xididdada dhiigga, lakabka dufanka iyo diirimaadka nidaamka dareenka. waxay si wax ku ool ah u hagaajin kartaa socodka dheecaanka ee u dhexeeya unugyada aadanaha, kordhinta dhaqdhaqaaqa unugyada, firfircoonida unugyada, waxay dhiirrigelin kartaa wareegga dhiigga iyo wareegga dhiigga ee marinka dhiigga ee aan la dareemi karin, dardargelinta dheef-shiid kiimikaadka iyo hagaajinta deegaanka gudaha ee maqaarka.
Hore: Q0 Rullaluiste Vacuum caato ah + Cavitaton + RF + Nalal Iftiin ah
Xiga: 11 khadadka HIFU ee wajiga & jirka
Mashiinka Vacuum Rf Mashiinka
Hoyga Rf Mashiinka
Mashiinka Mini Rf
Mashiinka Monopolar Rf
Mashiinka Multipolar Rf
Rf Machine Wajiga
Mashiinka Rf ee Wajiga
Xiinka Cavitation Rf Mashiinka
Jidhka Jirdhiska Jirdhiska Jirka ah RET CET Vacuum ...
Cinwaanka: Dabaqa 6aad, XinBaoYi GongMao Dhismaha B, HouTing Village, ShaJing Town, Degmada BaoAn, Magaalada ShenZhen, 518125, Shiinaha